कांग्रेसद्वारा उपनिर्वाचनबारे छलफल – Chitwan Post
कांग्रेसद्वारा उपनिर्वाचनबारे छलफल
भरतपुर । नेपाली कांग्रेस चितवनको विशेष बैठकमा विभिन्न चारवटा प्रस्तावहरुमाथि छलफल भएको छ । पार्टी कार्यालय कमलनगर नारायणगढमा मंगलबार सम्पन्न विशेष बैठकमा आसन्न उपनिर्वाचनलगायत विभिन्न चारवटा प्रस्तावमाथि छलफल भएको सचिव उत्तम जोशीले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नंं १६ तथा खैरहनी नगरपालिकाको वाड नं. ४ र ५ मा हुने उपनिर्वाचनमा टिकट सिफारिस गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले दोस्रो चरणको जागरण अभियानको समापनको दिन सहभागी भएका सम्पूर्ण चितवनवासीलाई धन्यवाद दिएको छ ।
यस्तै तनहुँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको प्रति कांग्रेस चितवनले घोर भत्सना गरेको छ । कांग्रेसले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले गत ११ गते शनिबार ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि चितवनमा भएको आक्रमणको पनि भत्र्सना गरेको छ ।
बैठकमा दसैँ, तिहार, छठ पर्व तथा नेपाल सम्वतको अवसरमा सद्भाव आदानप्रदानका लागि यही असोज २६ गते कोजाग्रत पूणिर्माको दिन चियापान कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।